सुदूरपश्चिका सांसदको प्रश्न सुपलाई हेप्नी ? – SaipalNews.com
सुदूरपश्चिका सांसदको प्रश्न सुपलाई हेप्नी ?
माघ २२ काठमाडौँ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना २८ वर्षसम्म पनि निर्माण नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमका संसदहरुले एकढिक्का भएर दबाव दिने अभियानमा जुटेका छन् । बोलन्या थली धनगढीमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा सुदुरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले २८ वर्षसम्म आयोजना अलपत्र परेकोमा आपत्ती जनाउदै अब सैब संसदहरु एक ढिक्का भएर दबाद दिने प्रतिवद्धता गरेका छनु् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बहुमतको सरकार आएकाले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण अगाडि बढाउन सक्ने बताए । राष्ट्रबादी नेता रावल भने, यस अघि नेपालमा विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा परियोजनाले पूर्णता पाएन । अहिले भने दुई तिहाईको सरकार भएकाले पश्चिम सेती परियोजना काम गर्ने सक्ने दाबी गरेका छन् ।
लामो समयदेखि निर्माण गर्न थुप्रै सरकारले पहल गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रबादी नेता रावलले आलोचना समेत गर्नुभयो । यो परियोजना निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीहरुलाई पहल गर्दा पनि कुनै पूँजी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनीहरुले काम छाडेर भाग्ने गरेको बताए । परियोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा सुदुरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको सांसदहरुको एउटै मत रहेको समेत बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार हुँदा यस परियोजनाको विषयमा चीनसँग सम्झौता भएको उल्लेख गर्नु भयो । साथै नेता रावलले भने,सरकार केही दिन पछि ढल्यो र सो परियोजनाको काम रोकियो । तर अहिलेको सरकारले चाहेपछि जस्तो सुकै परियोजना सम्पन्न गर्ने सक्ने भएकाले पश्चिम सेती परियोजनाबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो।
साथै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुदुरपश्चिमलाई केन्द्र सरकारले सधै अपहेलित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । २८ वर्ष अगाडि शुरु भएको परियोजना अहिलेसम्म किन बन्न सकेन् भन्दै नेता बडुले सरकार माथी प्रश्न गरेका छन् । नेता बडुले भन्नु भयो २८ वर्षसम्म किन परियोजना अगाडि बढ्न सकेन ? दुईवटा बजेट ल्याई सकेको वर्तमान सरकारले अर्को बजेट भाषणमा उक्त परियोजनाको बजेट छुट्याउनु नेता बडुले बताउनु भयो ।
केन्द्र सरकारको रेल र पानी जहाज मात्र नभएर पश्चिम सेती परियोजनामा पनि ध्यान दिनु पर्ने नेता बडुको भनाइ छ । रेल र पानी जहाजको बजेटले १० आठवटा परियोजना बन्न सक्ने भएकाले पहिला यस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने पर्ने नेता बडुले बताए । दुई पक्षीय वार्ता नभएको कारण चिनियाँ कम्पनी यस परियोजनाबाट हटेको गुनासो समेत गरे । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बडुको दाबी छ ।
यस्तै डोटीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद प्रेम आले भने सरकारमा रहेकाहरु पश्चिम सेती अगाडि बढाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बद्री पाण्डेले पश्चिम सेती परियोजना घर न घाट को भएको बताएका छन् । अहिलेसम्म बनेका सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन भन्दा पनि भाषणमा मात्र सिमित भएको नेता पाण्डेले दाबी गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिसभाका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पश्चिम सेती परियोजना दिन प्रति दिन सेलाइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दुईतिहाईको सरकारले देशको भाग्य बदल्ने परियोजनाहरुमा ध्यान नदिएका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको नेता कुँवरले दाबी गरेका छन् । साथै अहिलकोे सरकार राष्ट्रहितको परियोजना अगाडि बढाउनु भन्दा विवादित परियोजना अगाडि बढाई रहेकाले जनताको मनोबलमा आँचपुगेको नेता कुँवरले बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद चक्र प्रसाद स्नेहीले पश्चिम सेती परियोजना दिन प्रति दिन सेलाइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, परियेजनालाई सफल पार्न सुदुपश्चिमवासीहरुले आफ्नो गाँस काटेर समेत यस परियोजनामा सेयर हाल्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको दीगो विकास समीतीकी सभापती तारा देवी भट्टले सो परियोजना जतिसक्दो छिटो अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
कार्यक्रम आयोजक बोलन्या थली धनगढीका संयोजक यादव जोशीले पश्चिम सेती परियोजनालाई सरकारले प्याकेजको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे । सुदुरपश्चिमेली धेरैपटक सडकमा पुग्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै अब कार्यान्वयनमा जान नीतिनिर्माण तहमा भएकाहरु एक्सनमा जानुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
देशलाई संकटतर्फ धकेल्न तयार हुनेहरु नै आफूविरुद्ध घृणित प्रचारमा लागे. डा. भीम रावल